अव पाचवर्षपछि हिन्दी सिनेमाको दाजोँमा–नायक मरहट्टा-Nagarikaawaj.com
अव पाचवर्षपछि हिन्दी सिनेमाको दाजोँमा–नायक मरहट्टा
नायक रेस मरहट्टासँग रामजी ज्ञवालीले गर्नुभएको अन्र्तवार्ताको सम्पादीत अशं ।
– हैन त्यस्तो । म निरन्तर चलचित्रमै छु । अहिले चलचित्र ‘ईलाभेन स्ट्रिक’ को पोष्टप्रोडक्सनमा व्यस्त छु । अनि केही चलचित्रहरुको पनि स्किप्ट पढिरहेको छु । अर्को कुरा अवको केही हप्तामै फ्लोरमा जादैछ चलचित्र ‘फ्रेन्स’ । सजन श्रेष्ठको चलचित्र हो यो ।
अहिलेसम्म कति चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो होला ?
– एक दर्जन जति भए ।
अमेरीका वस्नुहुन्छ, नेपालमा चलचित्रमा झुल्कीनुहुन्छ, चलचित्रकै लागी आउने जाने गर्नुहुन्छ हो ?
– हो, हामी सपरिवार अमेरीका छौं । म आउने पनि विशेष कारण त यहि चलचित्रकै लागी भन्नुपर्छ । यद्यपी नेपाल आउने जाने ठेगानै हुदैन । काम हुदासम्म म नेपालमै वस्छु नत्र अमेरीका ।
अमेरीकामा चाहि तपाई के गर्नुहुन्छ ?
– खास त हाम्रो हाउजिङ व्यवसाय छ । तयस वाहेक त त्यहाँ पनि म चलचित्रहरु वनाईरहेको हुन्छु ।
हाउजिङ पेशालाई महत्व दिनुहुन्छ कि चलचित्रलाई ?
–मेरा लागी हरेक काम महत्वपुर्ण हुन्छन् । जुनमा पनि लगनशिल भएर काम गर्नेहो भने सफल भईन्छ भन्ने पाठ सिकेको छु । त्यसै अनुसार लाग्छु । दुवै राम्रो चलेको छ । महत्वपनि तयसै अनुसार दिएको छु ।
तपाई चलचित्रमा आउदा र अहिले के कुरामा परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?
– धेरै कुरामा चेन्ज भैसकेको छ । देशमा विकास वढि भएको छ । सम्भवत अवको ५ देखी ६ वर्षभित्र नेपाल पनि भारतको चलचित्र क्षेत्र जस्तै अगाडी वढ्छ कि भन्ने लाग्छ । जतिवेला म नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेको थिए त्यतीवेला क्यामेरा अहिलेका जस्ता थिएनन, निर्देशक पुरानै ढर्राका थिए । कलाकारहरु यत्तिको खुवी भएका थिएनन । तर अहिले ईलेक्टे«ानिक देखी हरेक कुरामा परिवर्तन आईसक्या छ ।
किन नेपालको चलचित्र क्षेत्र पछि छ?
– मैले तपाईलाई भने नी, जस्तो नेपालमा केही त्यस्ता राम्रा चलचित्रहरु पनि वनीरहेका छन् । यस्तै किसीमले वन्दै गए भने अवको ५ वर्षभित्र अय मुलुकको दाजोमा नेपाली चलचित्रहरु पनि जाने निस्चीतनै छ । नेपालकै कुरा गर्नेहो भने विगत केही वर्ष अघि लाख खर्च गर्ने चलचित्र उद्योगले अहिले करोड र त्यस भन्दा माथी खर्च गर्न थालिसक्या छ । तर हाम्रो चलचित्रको दाजोमा हिन्दी सिनेमामा करोडौ खर्च गरिएको हुन्छ नी त । खास त यहाँको मार्केट नभएकैले पछि परेको हो की जस्तो मलाई लाग्छ । जस्तै भारतको प्रान्त जस्तै भएको छ ।
तपाईले भन्नुभयो, नेपाली चलचित्रमा लगानी कम र हिन्दीमा वढि भयो, चलचित्र राम्रो वन्ने पैसाले मात्रै हो र ?
– जे कुरा पनि राम्रो गराउन पैसा आवश्यक हुन्छ । तर पैसा भएर मात्रै पनि हुदैन । सवै कुरा मिल्नुपर्छ भन्ने हो । जस्तै घर राम्रो गराउन के चाहिन्छ, पैसा भन्ने उत्तर आउँछ तर त्यहाँ राम्रा सामान र काम गर्ने मान्छे पनि राम्रो हुनुपर्छ । घर नयाँ डिजाईनको हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ भने ?
– अव केही महिनामा रिलीज हुन वाकी ‘मिसन पैसा २’ र ‘माई वेष्ट फ्रेण्ड’ हेरीदिनुहोला । र नयाँ छायाँकनमा जादै गरेको चलचित्र फ्रेन्स पनि राम्रो छ कथावस्तु त्यो पनि हेरीदिुहोला । म निरन्तर चलचित्र क्षेत्रमै हुनेछु । त्यस्तै मुलुकमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव हुन थालेको छ । यो पनि कुनै वाधा अड्चन नहोस् । राम्रोसँग चुनावी कार्यक्रम सकियोस् । नजिकीदै गरेको तिहार पनि रमाईलो सँग मनाउनुहोला । ह्याप्पी दिपावलि भन्न चाहान्छु ।